BESSEY CHERRY: SHARAXAAD IYO ASTAAMO - CHERRY
Chess sandstone sandstone waxay ka timid Waqooyiga Ameerika. Halkan waxay ku koraan bangiyada wabiyada iyo harooyinka, mararka qaarkoodna waxaa laga heli karaa jilbaha. Dufan Bessey duurka waxay noqon kartaa quruxda ugu weyn ee dhismaha beerta.
Thanks to a cherry fruiting deeqsi ah ayaa muddo dheer ku guuleystay kalsoonida beeraha badan oo dunida oo dhan. Uma baahna in la daryeelo, uu leeyahay iska caabin aad u sareysa, waa mid aan waxtar lahayn oo hoos u dhigaya heerkulka isla markaana wuxuu awood u leeyahay in uu midho u dhoofo xaaladaha ugu daran.
Bessey Cherry: Sharaxaad
Dhammaan noocyada of Bessey micro-jeeriga ayaa ku habboon ee size. Cherry wuxuu ku koraa baadiyaha oo ka kooban caleemo qumman, oo gaadhaya heer aan ka badneyn hal mitir iyo badh. Warshadu waxay leedahay caleemaha casaanka ah ee guduudan, oo daboolay lanceolate, caleemaha waxoogaa calaamad ah, gaarey dherer aan ka badnayn 5 cm.
Xilliga dayrta, caleemuhu waxay u noqdaan orange quruxsan. Bessei waxay leedahay ubax iyo huuri badan. Inta lagu jiro xilliga Bisaylkiisa, miraha madoow-madow oo leh dhexroor aan ka badnayn 1 cm waxaa la sameeyaa on laamihiisa, aad u tartan dhadhan.
Bessey waxay leedahay sumcad loogu talagalay dhirta quruxda badan. Tan waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in inta lagu guda jiro ubax dhan baadiyaha waxaa lagu daboolay cufnaanta cufan ee ubaxyo cad oo yar yar leh stamens cas. Intaa waxaa dheer, on dhirta la mid ah waxaa laga heli karaa ubaxyo iyo rag lab ah.
Geeddi waa mid aad u iftiimaya oo muujinaya horumarin degdeg ah xaaladaha raaxo leh. Dhaqanka gabi ahaanba ma dalbanayo halabuurka ciidda, kaas oo u oggolaanaya in si guul leh loogu koro dhammaan noocyada carrada.
Waa maxay cherry ciid, noocyo of bessey
Bessei waxaa lagu tiriyaa dhaqamada 1756. Maaddaama dhadhanka loo yaqaan 'astringent tastes', waxaa loo isticmaalay ugu horreyn ujeedooyin qurxinta, si loo ilaaliyo goobta dabaysha, si loo soo jiito gabayada, iyo sida dhirta daawada.
Recently, dalxiisayaasha ayaa keenay noocyo cusub ee jeeriga Bessey leh sifooyinka dhadhan sare.
Qarnigii 19aad, Charles Bessie, oo ah borofisar ka soo jeeda jaamacadda Waqooyiga Ameerika ee ku yaal gobolka Nebraska, ayaa qeexay nooc kale oo ah cherry sand, kaas oo loo magacaabay ka dib cilmiga - Cerasus besseyi. Sidaa darteed, Bessey Cherry waa uun hoosta of cherry ciid. Botanistayaasha - taxadarayaashu waxay kudhufeen Bessel si kala duwan oo ah cherry ciid hoose oo loo yaqaan Microcerasus pumila var.besseyi.
Ma taqaanaa? Qaar badan oo naqshadeeyayaasha muuqaalka ah ayaa si firfircoon u isticmaalaya jeeriga aan la dubin si ay u sameeyaan dijitaal ku yaal santuuqa. Waxa kale oo badanaa la isticmaalaa marka ay lagama maarmaan tahay in la hagaajiyo sifooyinka qurxinta ee goobta goobta carrada carrada ama bacaadka leh.
Gerriga gerbil iyo jeeriga bessey ma aha jeeriga dhabta ah. Labadaba waxay ka tirsan yihiin cirridka microwaves waxayna leeyihiin qaraabo dhow ee plomme, iyo, marka laga reebo this, ma xididka asturka ah sida scion oo aan la jeexan jeeriga dhabta ah. Laakiin dhinaca kale, waxay si fiican ugu gudubeen plomme, fersken iyo abrikot, iyo sidoo kale noocyo kale oo geedo midho leh.
Noocyada cherry ciid sii kordhaya, doorashada ee goobta beerta
Ka hor inta aadan ka dooran meel beerta bessei ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato halkaasoo buunshahani kori doono jawigeeda dabiiciga ah. Dabeecadda, dhirta waxaa laga heli karaa harooyinka iyo webiyada ee jilicsan ee Waqooyiga Ameerika. Dhaqanka ma aha mid aad u cakiran oo ku saabsan ciidda, sidaas darteed si guul leh loo beeray dhammaan noocyada carrada.
Markaad dooranaysid goobta beeritaanka, doorbididda waa in la siiyaa carrada ciidda leh. Laguma talinayo in la beero geedka gerbil si aad u dhow. Waa lagama maarmaan in masaafada u dhexeysa 2 ilaa 2.5 mitir la ilaaliyo inta u dhexeysa baadiyaha.
Bessey geedo cherry waxaa lagu beeray dhulka si ka fiican guga, tan iyo wakhtigii beerto ee dalaggu waxay la midoobaan muddada koritaanka firfircoon, taas oo si weyn u kordhisaa fursadaha in dhirta si fiican u qaadan doonaa.
Waa muhiim! Marka iibsato geedo of cherry-gerbil dayrta, waxaa fiican in aan ku degdegin in ay ku beeri dhirta dhulka u furan iyo iyaga prikopat iyaga ilaa guga. Xaqiiqdu waxay tahay in caleemaha aan lahayn waqti si ay u helaan nidaam xidideysan oo fiican ka hor inta bilawga ah ee barafku ay u badan tahay inay u dhintaan.
Haddii aad ku xisaabtamayso fruiting deeqda ah ee seedless, ka dibna doortaan meelo iftiin leh iftiinka for ay beerto. Inkasta oo aan si fiican loo dhicin ee cherry si ay ka kooban tahay ciidda, waxaa la ogaaday in dhaqanka muujinaysaa horumarin dheeraad ah oo ku saabsan carrada ciidda.
Bessey Cherry wuxuu koraa oo dhan North America. Qaaraankan waxaa lagu kala soocaa meelo kala duwan oo cimilo qulqulaya: halkan waxaa laga heli karaa degaan, quusto, dabiici ah, dabiicad, subkonctic iyo cimilada arctic. Tani waxay calaamad u tahay cherry si bessey ah sida warshad leh awood u-habboon.
Dhaqanku si fudud u dulqaadan karaa labada abaareed iyo hoos u dhig heerkulka ilaa -50 ° C. Inkasta oo uu awood u leeyahay in uu ku noolaado xaaladaha ba'an, cherry ciid wuxuu si fiican u dareemayaa cimilada dabiiciga ah, heerkul aan ka sareeynin +24 ° S, laakiin aan ka yareyn -16 ° C.
Maxay tahay in ay ahaato dhul lagu beerayo bessey
Cherry Bessey ma aha dalbashada qeyb ka mid ah ciidda, laakiin badankeeda waxay ku habboon tahay beerashada on carrada ciidda leh hannaan fiican oo hagaagsan. Horumarka "Bessey" ayaa sidoo kale suuragal ah in dhoobo culus ama loamy carruureed, si kastaba ha ahaatee, xaaladdan, si loo hagaajiyo dheecaanka, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo dhagaxyada ama dhagax yar oo la jajabiyey, iyo in la daboolo ciid. Xaaladdan, haddii xayawaanka qolofta ay hareereeyaan goobta, ka dibna si loo yareeyo pH waxay kudheeraadaan burka dolomite.
All oo ku saabsan cherry ciid ku haboon
Geedka Bessei waxaa lagu beeray guga, laakiin haddii aad soo iibsato sprouts kuwaas oo xididdadiisa ay ku qarsoon yihiin weel xiran, waxaa lagu beeray karaa xilliga dayrta ama xagaaga.
Marka laga beerto geedo, waa lagama maarmaan ah in la daryeelo ururka of drainage, tan iyo qoyaanka joogtada ah waxay keeni kartaa infekshin xididada leh kallana. Geedo cherry sand waxaa lagu gartaa formation xidid korodhay, oo sidaas daraaddeed uma baahnid isticmaalka dheeraad ah ee kiciyeyaasha xididka marka beerto.
Si aan u maleynin sababta geedo aan qaan-celin lahayn aysan qaadanin xididada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo dhacdada si masuuliyad leh. Ka hor inta aanad si taxadar leh u baarin caleemaha. Haddii caleemaha waxyeelo ama raad ka mid ah cudurada faafa, iyo xididdadiisa si adag ayaa loo qalajiyey, ka dibna waxa aad u macquul ah in la diido in la soo iibsado tijaabada noocaas ah. Geedo la waxyeeleeyey ayaa leh hoos u dhigis awoodeed oo aan u oggolaanaynin dhirta si ay u helaan nidaam xidid buuxa leh.
Guud ahaan, cherry Bessey gabi ahaanba aan qabyo ahayn, laakiin ka hor inta beeritaanka dalagga, waxaa lagu talinayaa in la baro qaar ka mid ah sifooyinka beerashada. Markaad go'aansato xulashada goobta degitaanka, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso godadka. Geedo lagu meeleeyay fogaan ah ugu yaraan 2 mitir midba midka kale, kaas oo siin doona meel ku filan oo duurka si ay u horumaraan. Kadibna u diyaari god meel qiyaastii 20 cm oo qoto dheer.
Marxaladda soo socota, buuraha daadsan ayaa ka kooban leben jaban ama burbur, kaas oo daboolaya lakabka 15-20 cm ee isku-dar ah ciidda oo ka kooban ciid, humus, sod ama beer beereed oo ah saamiga 1x1x1, ayaa lagu diyaariyaa bartamaha godadka, iyo isku dar ah Bacriminta oo ka kooban qaybo siman superphosphate, ash iyo compost.
Sida loo abuuro Bryson seedling
Kadib markii uu godka isku diyaariyo, qoyi ciidda ku jirta oo gooy ka jaraan dusha sare ee buurta biyaha. Markaas caleemaha la rusheeyaa dhulka oo si khafiif ah u tampi dhulka dhulka ku wareegsan. Ka dib markii laga beerto, guntooda waxaa lagu waraabiyaa biyo diiran. Laguma talinayo in biyo qabow loo isticmaalo sprouts, sababtoo ah taasi waxay sababi kartaa in cudurada infakshanka leh infakshan fungal ah.
Hababka Sanduuqa Jirka ee Sanduuqa
Dhammaan noocyada germiga ciidda si fiican u dhasho by gooyn, dhirayn iyo abuur. Xaaladda labaad, miraha dhaqanka ayaa si toos ah uga go'ay berry. Haddii aad qorsheyneysid inaad kaydiso walxo beerto muddo gaaban, markaa tani waa in aan lagu sameynin weel balaastig ah ama boorsooyin caag ah, laakiin dhalooyinka ama dhalooyinka birta ah, derbiyada kuwaas oo aan la cuni karin jiirka.
Ma taqaanaa? Qoyaan badani waa mushkilad daran marka qamadiga cagaaran ee ubaxyada, iyo in la kordhiyo suurtogalnimada dhirta miraha xilliga xagaaga roobka, 20 g oo malab ah oo litir ah oo biyo ah waa in la qasi karaa oo lagu buufiyaa isku dar ah oo duurka ah. Karaaca malabku waxay soo jiidanaysaa cayayaanka, taas oo gacan ka geysata bacriminta dhirta.
Abuurka Bessey waxay leeyihiin biqilka aadka u wanaagsan, kaas oo kuu ogolaanaya inaad hesho caleemo adag oo caafimaad leh, taas oo ugu dambeyntii u noqon doonta duurka buuxa.
Dib u dhigista abuurka abuurka ah ma qaadanayso waqti badan. Seeds ee dhaqanka dhulka u furan waxaa lagu beeray guga ama dayrta kadib dhirta, hubinta in ay sii kordhayaan.
Xakamaynta waa mid ka mid ah xaaladaha jiilaalka. Guryaha gurigooda, waxaa wanaagsan in aad isticmaasho dhirta: waxay leedahay aereyn aad u fiican waxayna si fiican u haysaa qoyaanka.
Marka hore, abuurka barar ah waxaa la dhigayaa maqlaha ku jira weel hore loo diyaariyey lana rusheeyey lakabka khafiifka ah ee carrada. Si loo abuuro abuurka biqilka, waxaa lagu meeleeyaa meel mugdi ah waxayna u egtahay heerkulo u dhaxaysa +3 ilaa +6 ° C.
Marka translevyvanie dhaco, heerkulku wuxuu yareeyaa 0 ° C, kaas oo xakamayn doona horumarintooda iyo ka hortagga biqilka aan caadiga ahayn. Ka hor inta aadan beerin ciidda, abuurka ayaa kululeynaya dhowr maalmood heerkul aan ka badneyn 18 ° C.
Habka taranka ugu caansan Bessey waa gooyn. Si aad u hesho wax beerto, caleemaha caleemaha yar yar ee jeeriga waxaa la gooyaa gooynta 10 ilaa 15 cm dheer. In qaybta saddexaad ee daaqada si taxadar leh u saar dhammaan caleemaha.
Burburinta la qabadsiiyay xaalad ah qoyaan badan iyo heerkulka dhexdhexaadka ah ee substrate gaar ah. Caleemaha waxaa lagu beeray weelasha horay loo diyaariyey oo ay ka buuxsanyihiin ciidda ka kooban dhulka soddon, humus iyo ciid, oo laga helay saamiyo siman.
Ka hor inta rooting, guntooda waxaa lagula talinayaa in ay yar yihiin hadhuudh, taas oo ka ilaalin doona saamaynta taban ee qoraxda tooska ah. Haddii aad si sax ah u sameyso, 10 ilaa 14 maalmood xididdada ayaa ka muuqan doona caleemaha.
Waqtigaan ka dib, gooyn ayaa la qoday oo loo diraa dhulka hoose ee jiilaalka, iyagoo horay u xidhxidhay xididadooda qoyan, laakiin ma qoyan qoyan. Iyadoo imaanshada guga, ay duurka waxaa lagu beeray meel joogto ah.
Bannaanka waaya-aragnimada badiyaa waxay dacaayado Guga, lafaha hoose ayaa ku xoqan dhulka oo go'an. Ka dib markii ay caleemaha koraan, waxay ku daboolan yihiin lakabka ah ee dhulka isku qasan leh humus, oo loo qaaday qaybo siman. Ka dib markii dayrta ee caleemaha, dhirbaaxo waa kala soocaa baadiyaha waalidka iyo u qaybsan qaybo leh xididdada iyo beeray meel joogto ah. Gooynta laguma talinayo in lagu kaydiyo, maaddaama tani ay yaraynayso awooddooda la-qabsiga waxayna hoos u dhigeysaa qaabka aasaasiga ah.
Sida loo daryeelo cherry ciid
Inkastoo xaqiiqda ah in chess Bessey ay tahay mid aan qabyo ahayn, ka dib markii xeerarka fudud ee beeritaanka iyo daryeelka ay ka caawin doonaan koraan dhir iyo caafimaad xoog leh oo si joogto ah kuugu farxi leh wax soo saarka. Daryeelida dalaggu ma qaadanayo waqti badan, sababtoo ah xitaa haddii aadan biyaha daadin maalmo badan, dhirta ma baabi'i doonto, maadaama ay leedahay dulqaad dulqaad leh. Dhaqanku maaha mid xasaasi u ah hoos udhaca heerkulka waxayna leedahay difaac aad u fiican oo ka soo horjeeda phytoinfections.
Waa muhiim! Sababtoo ah xaqiiqda ah in Bessey yahay dhaqan iskiis ah oo aan u baahnayn wax xeel dheer, si loo kordhiyo wax soo saar, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero dhowr geed oo ku dhow.
Si loo sameeyo qaabka caadiga ah ee duurka waxay u baahan doonaan inay si joogto ah u sameeyaan manjooyin, kuwaas oo ka hortagi doona gabowga iyo ilaalin doonaa guryaha taranka heer sax ah. Cabbitaanka nidaamsan iyo quudinta xilliga caadada ah ayaa kuu oggolaanaysa in aad sannad walba soo iibsato deeq wanaagsan.
Marka koraan ubaxyada ciidda ha ku tiirsanaanin dareenka dabiiciga ah waxayna ku tiirsan yihiin xaqiiqda ah in dhirta ay sameyn karto iyada oo aan la waraabin. Joog la'aanta qoyaanka waxay si weyn u yareyneysaa waxsoosaarka dhaqanka. Ururinta waraabinta tayo sare leh ayaa si gaar ah muhiim ugu ah marxaladda miro-dhiska: Buundada kuwaas oo si joogta ah u gaaban oo qoyaan soo saaraan miraha yaryar.
Wax khatar ah ma aha beerashada bessei xaaladaha qoyaan badan, maxaa yeelay taasi waxay keeni kartaa infakshanka caaryada ee duurka. Ka waraabinta duurka waa lagama maarmaan marka lakabka sare ee carrada horay loo qalajiyey by dhowr centimeters, iyo sidoo kale haddii ay jebiso oo aan haysan qaabka marka isku dayaya in ay cadaadiso dhoobo ah ee dhulka ka soo hooseysa baadiyaha.
Si Bessey ay u koraan oo u horumariyaan si fiican, duurka u baahan tahay in ay fuliyaan tallaabooyin agrotechnical fudud:
dhirbaaxo nidaamsan oo ka yimaada dhulalka jirridda iyo ka saarista haramaha;
La dabcinta aagga dabka si loo hagaajiyo astaamaha aeration ee ciidda;
bacriminta ciidda xilliyeed.
Talooyinka Bessey Cherry Bacriminta
Bacriminta waxaa lagu fuliyaa guga hore, ka hor inta ubax. Inta lagu jiro muddadan, waxaa lagu talinayaa in lagu soo bandhigo dhirta ama Bacriminta-bacrimin leh ee ciidda, taas oo kicin doonta horumarinta cagaarka iyo kor u qaadidda koritaanka duurka. Inta lagu jiro marxaladda daaqsinka iyo ubax, waxaad ku shubi kartaa dhirta leh xal mullein iyo ash, taas oo gacan ka geysan doonta samaynta miraha waaweyn. Ka dib goosashada, ka hor inta bilawga ah ee cimilada qabow, waxaad kordhin kartaa xoogagga ilaalinta ee dhirta adigoo soo bandhigaya Bacriminta adag ee ciidda.
Xaafadaha dabiiciga ah, maadada cagaarka ah marar dhif ah ayay ka jirtaa cudurrada. Si kastaba ha noqotee, marka warshad lagu beeray shuruudaha qoyaan badan, suurtogalnimada cayayaanka dhirta leh fangasiinaha fangaha ayaa si weyn u kordhaya.
Sameynta shuruucda fudud waxay gacan ka geysan doontaa ka hortagga horumarinta cudurada fangas:
ka saarista caleemo dhacday ka timid goobta dayrta;
manjooyin joogto ah ee dhammaan caleemaha waxyeeloobay;
daaweynta dhirta oo leh 3% xal sulfate ah ka hor inta ubax;
ku buufinta duurka ka hor intaad ubaxsan yihiin burooyinkeeda leh xal 1% oo ah isku dar ah Bordeaux;
daaweynta nabarrada daweynta cirridka leh beerta beerta.
Chess Bessey waxaa si aad ah u saameeya weerarrada cayayaanka; Xaqiiqdu waxay tahay in marxaladda ubaxa dhirta ay soo saaraan caraf udgoon oo cayayaanka aan jeclayn wax badan.
Qodobada Sanduuqa Sanduuqa Sanduuqa
Gundhigyada ciidda guga waa wax aan ka duwaneynin manjooyin kale oo miraha ah. Goobta Bessi - dhacdooyinka ugu muhiimsan ee u oggolaanaya dhirta inay si wanaagsan u horumariyaan iyo inta ay suurtagal tahay si ay u ilaaliyaan kartida ay u leeyihiin fruiting.
Waa muhiim! Xasuuso in laamiyadii hore ee geedka kirikil ah ee gaadhay da'da lix jir ay siin doonaan wax soo saarkooda yar, mirahooda waxay noqon doonaan kuwo yaryar iyo wax ka badan.
Xeerarka aasaasiga ah ee sameynta duurka Bessey duurka:
ee sanadka ugu horeeya nolosha ee geedo, biqil waxaa la gooyaa 5-10 cm ka soo top;
si joogto ah uga qaadaan laamood oo gaaray ilaa da'da afar jir ee geedka, tan iyo waa caleemaha yar yar oo si deeqsinimo leh midho u dhali;
kordhay sameynta budo waxaa lagu arkay caleemaha oo gaara dhererka aan ka badnayn 50 cm, sidaa daraadeed isku day in aad ka tagto laamoodka cabbirkan duurka.
Dhaqanku wuxuu gebi ahaanba ku soo boodaa bartamaha ama dhamaadka August, laakiin isla xilligaa miraha midkoodna ma dhicin, iyaga oo ku haray laanta. Miraha ka yar saamaynta iftiinka qorraxdu waxay si tartiib ah u luminayaan macaamiishooda iyo waxoogaa yareynaya, taas oo si weyn u kordhisa sifooyinka dhadhanka waxayna siisaa dhadhanka jilicsan.
Bessey Cherry: Sandy Cherry Pros iyo Cons
Beerista Bessey Cherry waxay leedahay faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Sidaas, waxa si sax ah u soo jiidata dhaqanka this ee bannaanka u:
wuxuu leeyahay sifooyinka sare ee qurxinta;
wuxuu leeyahay awood waxtar leh;
ma ahan mid u nugul cayayaanka cayayaankuna wuxuu leeyahay difaac aad u fiican oo ka dhan ah phytoinfections;
si fiican u kori karaa oo midho u dhali karaa xaalado adag oo adag;
Waxaa lagu gartaa dulqaad la'aanta sare iyo kartida loo dulqaadan karo hoos u dhig heerkulka ilaa -50 ° C.
Cuntada ugu weyn ee warshadu waa kor u kaca qiimaha miraha. Laakiin khasaaradani waa sahlan tahay inaad u noqotid sharaf, haddii aad haysato miro ku yaala laamaha muddo yar ka dib koriinkara oo dhan.
Besseya waa dhaqanka aad u qurux badan, ee soo noqoshada dareenka iyo daryeelka, waxay ka jawaabi doonaan muuqaal qurux badan iyo miro cadcad. Intaa ka sokow, waxay si fiican ugu noolaan kartaa aag kasta oo cimilada ah, taas oo ay ugu wacan tahay xitaa kuwa ku nool gobollada waqooyi waxay awoodi doonaan inay kobciyaan beerahooda.